काठमाडौँ। चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले सञ्जय दत्तलाई चाँडै क्यान्सर रोग जित्न उत्प्रेरणा दिएकी छन् । सञ्जयलाई फोक्सोको क्यान्सर पुष्टि भएपछि मनिषाले यो दुखद घडीमा संयम हुन र आत्मबल दह्रो पार्न आग्रह गरेकी छिन्। सन् २०१२ मा मनिषालाई पनि चौथो स्टेजको डिम्बग्रंथिको क्यान्सर भएको थियो।
क्यान्सरलाई जितेकी मनिषाले सञ्जयलाई फोक्सोको क्यान्सर हुँदा धैर्य र बलियो रहन सन्देश पठाएकी छिन्।
मनिषाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘बाबा (सञ्जय दत्त) तिम्रो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सुन्नमा आउँदा धेरै दुःख लागेको छ, मलाई थाहा छ तिमीमा धेरै शक्ति छ। पहिला पनि तिमीले जीवनका धेरै कठोर संघर्षलाई पराजित गरिसकेका छौ। मलाई आशा छ, तिमीले यस अवस्थालाई पनि जितेर फर्कने छौ। तिम्रो शीघ्र स्वास्थ्य लाभका लागि प्राथना गर्दछु ।’
Sadden to hear about your health challenge dear baba @duttsanjay .. but I know you are tougher !! There has been tremendous struggles in your life and you overcame them, this too shall be yet another win .. praying for your well-being ??????
— Manisha Koirala (@mkoirala) August 12, 2020
सञ्जयलाई क्यान्सर भएपछि उनकी पत्नी र जुम्ल्याहा बच्चा दुबइबाई भारत फर्किएका छन् भने उनी थप उपचारको लागि अमेरिका जाने भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधबार, साउन २८, २०७७ १५:५१:२४